WINDOWS 10 I-LAPTOP AYIWABONI AMA-HEADPHONE? NAKHU UKUTHI UNGAYILUNGISA KANJANI - AMANANI
Windows 10 I-Laptop ayiwaboni ama-headphone? Nakhu ukuthi ungayilungisa kanjani
Kwesinye isikhathi ngenkathi uxhuma umakhalekhukhwini ukuze ubuke i-movie, ulalele umculo wakho owuthandayo kwikhompyutha yakho, ungahle ungene enkingeni efana nayo ama-headphone awaziwa yiWindows 10 . Ikakhulukazi ngemuva kwabasebenzisi bamuva bokubuyekeza windows 10 1903 babika windows 10 ilaptop engaziboni izifakwakhanda , abezwa lutho yize isikhulumi sisebenza kahle.
Okuqukethwe umbukiso 1 Isifakwakhanda asibonwa amawindi 10 1.1 Setha ihedfoni njengedivayisi yokudlala ezenzakalelayo 1.2 Qalisa isixazululi nkinga se-Playing Audio 1.3 Khipha uphinde ufake amadrayivu we-Sound 1.4 Shintsha ifomethi yomsindo ezenzakalelayo
Ngisebenzisa iWindows 10 kukhompyutha yami, kepha angikwazi ukuthola noma imuphi umsindo ozophuma kumahedfoni wempilo yami. Ngixhuma ama-headphone ami ku-3.5mm headphone jack ngaphambili, kepha lokho akwenzi lutho. Ngiyazi ngokweqiniso akuyona i-headphone, njengoba isebenza kahle ku-smartphone yami.
Uma nawe unenkinga yenkinga efanayo, 'ikhompyutha engaboni ama-headphone' ungakhathazeki, lapha sinezixazululo ezisiza ukuyilungisa.
Isifakwakhanda asibonwa amawindi 10
Ngaphambi kokuqala engxenyeni yokuxazulula inkinga:
Hlola futhi uqiniseke ukuthi ama-headphone akho axhumeke kahle kwi-laptop yakho
Xhuma ihedfoni yakho kwenye ichweba bese ubona ukuthi iyayixazulula yini inkinga.
Zama ihedfoni yakho kwenye idivaysi, ukuze uhlole futhi uqiniseke ukuthi idivaysi ayiyiphutha.
Futhi, vula iwindi le-services services usebenzisa services.msc lapha hlola bese uqinisekisa ukuthi insizakalo yokwakha i-Windows audio ne-Windows audio endpoint state.
Uma ufake i Isoftware yeRealtek, evulekile i Umphathi Womsindo we-Realtek HD, bese uhlola i “Khubaza iphaneli engaphambili ujack ukuthola ”inketho, ngaphansi kwezilungiselelo zesixhumi ku- i iphaneli yohlangothi lwangakwesokudla. Amahedfoni namanye amadivayisi alalelwayo sebenza ngaphandle kwanoma iyiphi inkinga .
Qhafaza kwesokudla isithonjana sevolumu ngezansi kwesokunxele kwesikrini sakho, bese ukhetha Imisindo.
Chofoza ithebhu yokudlala, bese uhlole idivayisi yakho efakwe kuhlu lapho,
Uma ama-headphone akho engabonakali njengedivayisi efakwe kuhlu, chofoza kwesokudla endaweni engenalutho bese uqinisekisa ukuthi ama-Show Disabled Devices anendawo yokuhlola kuyo.
Setha ihedfoni njengedivayisi yokudlala ezenzakalelayo
Qiniseka ukuthi ihedfoni oyisebenzisayo isethwe njengedifolthi kukhompyutha.
Vula Iphaneli Yokulawula kusuka kusesho lwemenyu yokuqala.
Khetha i-Hardware ne-Sound bese uqhafaza umsindo.
Lapha Ngaphansi Kokudlala, chofoza kwesokudla bese ukhetha Khombisa amadivayisi akhubazekile.
Ohlwini lwamahedfoni, chofoza kwesokudla egameni ledivayisi yakho yekhanda.
Khetha Vumela, Qhafaza Setha njengokuzenzakalelayo.
Ekugcineni, chofoza Faka isicelo, Xhuma kabusha ama-headphone akho bese uhlola ukuthi inkinga ixazululiwe yini.
Qalisa isixazululi nkinga se-Playing Audio
IWindows inesixazululi nkinga se-Playing Audio esakhelwe ngaphakathi, esizitholela yona futhi sisize ukulungisa izinkinga ukuvimbela umsindo we-Windows ukusebenza kahle kufaka phakathi inkinga yeComputer engayiboni ihedfoni yakho.
Vula uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo usebenzisa isinqamuleli sekhibhodi seWindows + I
Chofoza ku-Update & security, bese uxazulula inkinga,
Chofoza Ukudlala Umsindo, bese Qalisa isixazululi nkinga.
Chofoza Okulandelayo. Khetha amahedfoni. Chofoza Okulandelayo kamuva.
Chofoza Cha, Ungavuli izithuthukisi zomsindo.
Chofoza imisindo Playtest.
Uma ungezwanga umsindo, chofoza angizwanga lutho.
Lokhu kuzoshukumisela iWindows ukuthi iphinde ifake umshayeli womsindo.
Landela imiyalo esesibukweni ukuze uqhubeke nokuxazulula inkinga.
Khipha uphinde ufake amadrayivu we-Sound
Cindezela Ukhiye weWindows Key X. bese uqhafaza Umphathi wedivayisi .
Nweba ‘ Izilawuli zevidiyo yomsindo ’ .
Qhafaza kwesokudla kudivayisi yoMsindo efakwe kuhlu bese uqhafaza ku-‘ Khipha ’ .
Khetha inketho ukuze Susa isoftware yomshayeli .
Qala kabusha ikhompyutha ngemuva kokukhishwa kwayo.
Manje landa abashayeli iwebhusayithi yomkhiqizi bese uyifaka.
Kunconywe kwisithangami sikaDell:
Vula iMenenja yedivayisi usebenzisa i-devmgmt.msc ebhokisini lokusesha bese ushaya u-Enter.
Nweba i- 'Sound, video & game controllers' bese uchofoza kwesokudla ku- 'Realtek High Definition Audio'.
Khetha inketho 'Buyekeza i-Software Yesoftware' bese uchofoza ku- 'Phequlula ikhompyutha yami ukuze uthole isoftware yokushayela'.
Chofoza okuthi 'Ake ngikhethe ohlwini lwabashayeli kukhompyutha yami'.
Faka isheke ebhokisini elithi “Khombisa ihadiwe ehambisanayo” uma kungakahloliwa.
Ohlwini lwamadivayisi, chofoza u- “High Definition Audio” (umshayeli wendabuko) bese uchofoza u- “Okulandelayo”.
Ebhokisini le-Update Driver Warning, chofoza u- 'Yebo' (faka umshayeli) bese uqala kabusha i-laptop.
Manje usuzoshintshela kudrayivu yomsindo yomdabu.
Qaphela: Sebenzisa 'idivayisi ejwayelekile yesoftware' uma i- 'High Definition Audio' ingekho ohlwini.
isango elizenzakalelayo alitholakali lungisa
Shintsha ifomethi yomsindo ezenzakalelayo
Futhi kwesinye isikhathi uma ifomethi yomsindo ezenzakalelayo ingalungile, ungahle uhlangane nalolu daba lwehedfoni olungasebenzi. Nazi izinyathelo ezisheshayo zokushintsha ifomethi yomsindo ezenzakalelayo kudeskithophu yakho:
Vula Iphaneli Yokulawula, Chofoza i-Hardware ne-Sound.
Khetha Umsindo, bese uya kuthebhu yokudlala,
Qhafaza kabili kudivayisi yakho yokudlala ezenzakalelayo.
Uzothola umaki olujiyile olujiyile eceleni kwaso.
Shintshela kuthebhu ethuthukisiwe.
Kumenyu yokudonsela phansi, ungashintsha ifomethi yomsindo ezenzakalelayo lapha.
“Hlola” isikhathi ngasinye lapho uyiguqula, ukubona ukuthi uyaqala yini ukuzwa umsindo.
Okunye okungenzeka ukuthi iRealtek HD Audio Manager ayilungiselelwe kahle ukudlala umsindo ngama-headphone akho. Futhi Ukushintsha izilungiselelo kungaxazulula inkinga
Vula Umphathi Womsindo we-Realtek HD.
Chofoza isithonjana sefolda encane ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Thikha ibhokisi eliseduze Khubaza ukutholwa kwephaneli langaphambili .
Chofoza KULUNGILE .
Izixazululo ezi-7 zokulungisa Windows 10 Ayikwazi Ukuxhuma Kule Nethiwekhi (i-WiFi)
Ungayilungisa kanjani insiza yenethiwekhi ayitholakali windows 10(Ivula kuthebhu entsha yesiphequluli)
IMicrosoft Edge Browser isebenza ngokunensa? Nakhu ukuthi ungalungisa kanjani futhi usheshise
Kuxazululiwe: Uhlelo lokusebenza alukwazanga ukuqala kahle Windows 10
amawindi awakwazi ukuxhuma kuphrinta
win 10 zokusebenza ngeke kuvulwe
ukuthuthukiswa kwamawindi kubambeke ngama-99%
chrome ephezulu cpu windows windows 7
buka imiphumela yokuxilongwa kwememori yewindows
Ungalungisa kanjani ukuxhumeka kwendawo kwe-ip ukumisa